3phase induction mota yekutengesa marudzi ekugadzira mutengo ac mota
3phase induction ac mota inogadzira inotengeswa
3 chikamu induction motors yekutengesa
Inonyanya kushandiswa mota 3 phase induction mota, 3 phase squirrel cage induction mota.
Mhando dzese dzehatu phase induction mota, teko 3 phase induction mota
Tsvaga pano yepamusoro mhando 3 chikamu magetsi induction motors
Matatu-chikamu AC ane matatu manyuko emagetsi AC, ese ari kunze kwechikamu pamwe neese. Matatu matatu squirrel keji induction mota anotsanangurwa kuita matanhatu akasiyana standard mhando.Speed ​​kudzora kwe6 chikamu induction mota ne stator frequency.Split phase induction mota mukati hindi, inotenderera magnetic field mu3 phase induction mota, 3 chikamu asynchronous mota, 3 chikamu 3 pole mota, 4 chikamu induction mota iri kutengeswa.
Isu tinopa 158 teko 3 chikamu induction mota zvigadzirwa.
Iyo induction mota inotenderera nekuda kweiyo inotenderera magineti mu3 phase induction mota, 4 pole mota 3 chikamu, kugadzirwa kweiyo nyore 3 phase induction motor kumhanya mutariri.
Matanho Matatu Induction mota Type
Matanho matatu anodonhedza ring induction mota anogona kushandiswa maairesi maindasitiri uko kunomhanya mhanya uye kwakakwirira torque kuri kwekutanga zvinodiwa.A3 phase squirrel cage induction mota iri mhando yematatu phase induction mota.
Mhando dze3 phase induction mota
3 chikamu squirrel cage induction mota
Kune maviri marudzi e3 phase squirrel cage induction mota zvichienderana nerudzi rwekuvaka yeRotor.Speed ​​control ye3-chikamu induction mota ichishandisa rotor impedance.Three phase slip ring induction mota inogona kushandiswa kune maindasitiri mawaya uko kusiyanisa kumhanya uye kutanga kukuru torque are primeerals.types of matatu phase induction mota isu kutsigira ndeye squirrel Cage Induction mota. Slip Ring Induction mota kana Wound Rotor Induction mota kana Phase Wound Induction mota. 50 Hz kana 60 Hz cage induction motors, zvakare electromagnetic munda, Aggregate, Cement, Chemical, Mafuta, Chikafu cheGasi uye simende nezvimwe.
Indasitiri Yezvekutengesa uye Yekugadzirisa Service: Motors, mapombi, gearbox, inverters, uye chiuno. Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kutibata nesu, tichafara kukubatsira! Boka redu rine hunyanzvi rinobatsira iwe kudzivirira nguva yekudzoka uye dzoka kubasa kuitira kuti ugare uchinetseka wakasununguka. Tiidzei nhasi! Isu tinotora mhando sekubatikana uye mutengo wakaderera ndiko kutendeseka. Boka redu rine hunyanzvi rinobatsira iwe kudzivirira nguva yekudzoka uye dzoka kubasa kuitira kuti ugare uchinetseka wakasununguka. Tiidzei nhasi!